N'ogbe Mgbanwe Polyvinyl Chloride Ihe N'ihi PVC akpụkpọ ụkwụ Ọgwụ emeputa na Supplier | INPVC
Ihe: Resin PVC+Ihe mgbakwunye enyi na enyi
Akpụkpọ ụkwụ PVC a makwaara dị ka akpụkpọ ụkwụ mmiri ozuzo ma ọ bụ gumboots, ha bụ akpụkpọ ụkwụ mmiri na -adịghị na PVC Compound. Akpụkpọ ụkwụ PVC na-adịkarị n'okpuru ikpere ma na-eyikarị ya na apịtị ma ọ bụ mmiri mmiri. Akpụkpọ ụkwụ PVC anaghị echebe naanị ụkwụ ka mmiri ghara ịcha ya, ha na -eyikarị maka ọtụtụ ihe gụnyere ejiji, ịkụ azụ, ịkọ ugbo, owuwu, wdg.
Polyvinyl chloride, nke a na -akpọkarị PVC, bụ polymer thermoplastic. o nwere ihe na-egbuke egbuke, na-eguzogide corrosion na nke na-adigide. Ọ na-agbakwunye ụfọdụ plasticizers, onye na-egbochi ịka nká, yana ihe mgbakwunye n'ime usoro iji bulie nguzogide ọkụ ya, ike ya, scalability na ihe ndị ọzọ. Ngwakọta PVC dị nro na-agbanwe agbanwe na-enye akpụkpọ ụkwụ ntụsara ahụ, rọba dị ka nke dabara adaba.
Ngwakọta akpụkpọ ụkwụ anyị nwere nguzogide dị elu, arụmọrụ na nhazi, ihe ọhụrụ na ọdịdị dị elu. Anyị na -enye usoro ahaziri iche & nke pụrụ iche dịka ihe achọrọ na nkwa nke ịdị mma na ọrụ.
Anyị na -echepụta, rụpụta ma na -eweta nnukwu ngwongwo PVC dị elu (granules/pellets) maka akpụkpọ ụkwụ nchekwa, akpụkpọ ụkwụ ụlọ ọrụ, akpụkpọ ụkwụ mmiri ozuzo na akpụkpọ ụkwụ ụmụaka. Enwere ike iji ihe akpụkpọ ụkwụ anyị na akpụkpọ ụkwụ anyị na gburugburu ụlọ ọrụ siri ike na ọnọdụ ihu igwe, yana ụfọdụ atụmatụ ụlọ anyị gụnyere kemịkal, mmanụ, mmanụ ụgbọ ala, UV yana nguzogide mmịfe.
Ogige akpụkpọ ụkwụ dị elu
Ogige akpụkpọ ụkwụ akụnụba nke akụ na ụba
Ogige akpụkpọ ụkwụ abụọ
Ogwe akpụkpọ ụkwụ Nitrile PVC
Ekweghị ekwe ShoreA55-A75
Ngwa Gọbọm. Akpụkpọ ụkwụ Wellington. Akpụkpọ ụkwụ nchekwa. Ụgbọ elu. Akpụkpọ ụkwụ mmiri ozuzo. Gumboots Ngwuputa.
Akpụkpọ ụkwụ akpụkpọ ụkwụ na -echebe. Ụgbụgbọ ugbo. General nzube gumboots.
Gumboots na -edozi nri. Gumboots ọhịa. Akpụkpọ ụkwụ mmiri ozuzo ụlọ ọrụ. Akpụkpọ ụkwụ.
Akpụkpọ ụkwụ ụlọ. Akpụkpọ ụkwụ ndị agha. Akpụkpọ ụkwụ ọrụ. PVC/Nitrile akpụkpọ ụkwụ. Akpụkpọ ụkwụ akpụkpọ ụkwụ
PVC akpụkpọ ụkwụ akpụkpọ ụkwụ. Akpụkpọ ụkwụ Ogige.
Eyi eguzogide. Ileghara
Nnọọ ogologo na nkasi obi
Mkpụrụ osisi granules dị nro
Ezigbo mgbanwe. Ike nke ọdụdụ ka mma.
Ezi Chemical eguzogide
Emechara matte ma ọ bụ kenkowaputa
Njupụta dị ala. Microcellular dị fechaa
Ịrụcha ihe dị larịị dị nro
Njirimara ịkpụzi ọmarịcha
Ọdịdị Antistatic na Omume dị
Anyị na -enye nhazi & usoro pụrụ iche dị ka ihe achọrọ na nkwa nke ịdị mma na ọrụ. Nkwenye anyị maka nyocha na mmepe na -eme ka anyị jide n'aka na anyị nwere ike ịnye ihe ọhụrụ dịka iji gboo mkpa ngwaahịa gị. Ọ bụrụ na ịchọrọ ogige PVC na -agbanwe agbanwe maka ebumnuche nrụpụta, ị nwere ike ịtụkwasị ndị nrụpụta ihe ọhụrụ na INPVC obi iji nye nsonaazụ kacha mma.
Nke gara aga: Ihe mkpuchi PVC doro anya maka akpụkpọ ụkwụ ụmụaka jelii akpụkpọ ụkwụ ụmụaka
Osote: PVC granules maka Slipper Uppers V-Straps Injection
Ogige PVC maka akpụkpọ ụkwụ kọmpat na ụfụfụ ...